बाल संसार – Online Bichar
लकडाउन, घरको बसाइ र हामी साना विद्यार्थी
प्रकृती धमला, १६ जेठ २०७८ मेरो घर झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका वडा नं. ९ मा पर्दछ । कोरोना महामारीको कारण लकडाउन भएर हामी घर भित्र छौं । स्कुल गएर पढ्न पाएका छैनौं । लामो समयदेखि स्कुल बिदा छ । हामी निरोगी भएर बाँच्नु पर्छ । रोग लाग्नबाट बच्न हामीले सावधानी अपनाउनु पर्दछ । कोरोनाबाट बच्न लकडाउनको पालना गरेर घर बस्नु नै राम्रो हो । घरमा बसेर पनि हामीले धेरै कामहरु सिक्न सक्ने रहेछौं । घरको बसाइबाट पनि हामीले धेरै फाइदा…
बिदाको समय सदुपयोग गरौं साथीहरु
मानुश्री खतिवडा, १४ जेठ २०७८ हिंजोआज लामो बिदा छ । अहिलेको समयमा कोरोनाको दोस्रो रुप जताततै फैलिरहेको छ । कोरोनाको महामारीबाट बच्दै हामीले हाम्रो दैनिक काम गर्नुपर्दछ । हामीले कोरोनाबाट बच्न घरमै बस्नु पर्दछ र बेलाबेलामा साबुन पानीले राम्रोसंग हात धुनु पर्दछ । कोरोनाको महामारी कहिलेसम्म रहने हो हामीलाई थाहा हुदैन । हामीलाई घरमा बस्दा दिक्क लाग्ने गर्दछ । घरमा बस्दाको यो फुर्सदलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो विद्यालय कहिलेदेखि लाग्ने हो हामीलाई थाह छैन् । यस्तो बेलामा हामीले घरमै…
कहिलेबाट स्कुल जानु होला ?
जिज्ञासु घिमिरे कक्षा–२ ९ जेठ २०७८ कोरोना भाइरस एउटा रोग हो । अहिले कोरोना देशभरी फैलिएको छ । त्यसैले हामी सुरक्षित हुनु पर्छ । यो कोरोनाको बेला मास्क लगाउन नबिर्सिउँ । सेनिटाइजर पनि लगाऔं । कोरोनाले गर्दा हामी स्कुल जान पाएका छैनौं । यो कोरोनाले गर्दा हामीलाई कति नोक्सान भइरहेको छ । मानिसहरु दिन–दिनै मर्दैछन् । यदि कोरोना लाग्यो भने होम क्वारेन्टाइन बसौं । स्वास फेर्न गाह्रो भयो भने मात्र हस्पिटल जानुपर्छ । कोरोना अघिल्लो पटक पनि आएको थियो ।…
भागरथी भट्टको हत्य : नजिककै व्यक्तिमाथि शंका
घटना हुँदा घटनास्थल हुँदै हिँडेका व्यक्तिसमेत अनुसन्धानको दायरामा पत्रपत्रिकाबाट २७ माघ २०७७ । बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको हत्यामा नजिकका व्यक्तिको नै संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ । प्रहरीले हत्याको अनुसन्धानमा सोमबारसम्म दुई दर्जन व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्दै अनुसन्धानको दायरामा राखेको छ । प्रहरीले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा चिनजानका, आफन्त र स्कुलका साथीभाइ, उनीसँग फोन सम्पर्कमा केही दिनयता रहेका व्यक्ति, घटना हुँदा घटनास्थल हुँदै हिँडेका व्यक्ति, सवारी साधन र त्यस नजिक सम्पर्क भएका फोनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको जनाएको…
सडक बालबालिका मुक्त बनाउने तयारी
पत्रपत्रिकाबाट काठमाडौँ, २९ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालबालिका देशको सुदूर भविष्य भएको बताउनुभएको छ । उहाँले बालबालिकाको हक, हित र उनीहरूका अधिकारको संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै यस आर्थिक वर्षभित्रै नेपाललाई ‘सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्ने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बालबालिका देशको सबल भविष्यका आधार हुन् भन्ने मान्यताप्रति सरकारको निष्ठाका कारण बाल अधिकार संरक्षणमा समर्पित रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले यसअघिको पुस्ताले लामो…
लकडाउन र बालबालिका – अनुभवको कुरा सुनौं(भिडियो सहित)
८ बैशाख २०७७ सोमबार लकडाउन अथवा बन्दाबन्दीले विद्यालय उमेरका बालबालिकाको मनोबिज्ञानमा कस्तो असर परेको होला ? विद्यालय, पाठशाला, हाट बजार हिडडुल सबै बन्द छ । विद्यालयमा साथी समूहसंग रमाउने खेल्ने बालबालिकाको अहिलेको घरको दैनिकी कस्तो होला ? भनिन्छ आमाबाबुको काख नै बालबालिकाको पहिलो पाठशाला हो । एक महिनादेखि बालबालिकाहरु आफ्ना अभिभावकको आँखाको वरिपरि छन् । के गर्दैछन् तथा कस्तो दैनिकीमा छन् उनीहरु ? यसै सन्दर्भमा अनलाईनबिचारले कक्षा चारमा पढ्ने अनुभव दाहाल संग गरेको छोटो कुराकानी । हेर्नुहोस् भिडियो सहित ः …
प्रकृति गुरु हो
लक्ष्मीप्रसाद कोइराला अलिकति छुट्टीहुँदा आफ्ना नानीहरूलाई फूलेको फूललाई हेराएर हाँस्न सिकाउनुस् प्रकृति गुरु हो । अलिकति छुट्टीहुँदा आफ्ना नानीहरूलाई भुनभुनाउदो मौरीलाई हेराएर गुनगुनाउन सिकाउनुस् । प्रकृति गुरु हो । अलिकति छुट्टीहुँदा आफ्ना नानीहरूलाई घरतरुलको मुन्टालाई हेराएर कहिलेकाही शिर झुकाउन लाजमर्दो होइन भन्ने सिकाउनुस् । प्रकृति गुरु हो । अलिकति छुट्टीहुँदा आफ्ना नानीहरूलाई भूवरीको झोक्कालाई हेराएर फोहोर पतिङ्गर उढाउन सिकाउनुस् । प्रकृति गुरु हो । अलिकति छुट्टीहुँदा आफ्ना नानीहरूलाई दूध र पानी मिलेको हेराएर साथिभाइसँग मिल्न सिकाउनुस् । प्रकृति गुरु हो…
बालबालिका हुर्काउनका लागि आमा–बुवालाई टिप्स
एजेन्सी काठ्माडौं, २१ पुष । बच्चाहरूको सही पालन–पोषणका लागि परिस्थिति अनुसारको सोचाइ–बुझाइ हुन आवश्यक छ । निश्चय नै, सबै बच्चाहरूमा एउटै नियम लागू हुन सक्दैन – चाहे बच्चाहरूको ख्याल राख्ने कुरा होस्, माया देखाउने कुरा होस् वा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने कुरा होस्— हरेक बच्चासँग भिन्न–भिन्न तरिकाले प्रस्तुत हुन जरूरी छ । सद्गरुले भनेका छन्, ‘मानौँ कि म नरिवलको रूखमुनि उभिएको छु अनि तपाई मसँग सोध्नुहुन्छ, ‘एउटा रूखमा कति पानी हाल्नुपर्छ रु’ मेरो जवाफ हुनेछ, ‘एउटा बोटमा कम्तीमा पनि पचास…
बालबालिकालाई कसरी प्रतिभावान बनाउने ?
काठमाडौं, ३ चैत । प्रायजसो सबै अभिभावक आफ्ना नानीबाबुहरुको भविष्यबारे चिन्तित हुन्छन्।आफ्ना नानीबाबुहरुलाई सही बाटो देखाउन उनीहरु हर प्रयासमा तल्लिन हुन्छन्। नानीबाबुहरुलाई पढाइमा सबल बनाउन वा चनाखो बनाउन अनावश्य दबाब दिनेगर्छन्।तर यसो गर्नु राम्रो होइन।इच्छाविरुद्ध दबाब दिँदा उनीहरुमा पढाइप्रति अरुचि बढेर आउँछ। उनीहरुलाई चनाखो वा जिम्मेवारी बनाउन सानै उमेरदेखि कोशिश गर्नुपर्छ।किनकी सानो उमेरका नानीबाबुहरुको दिमाग छिटो विकसित हुन्छ।संझाएको छिटो बुझ्ने गर्छन्। अभिभावकले नानीबाबुहरुसँग बस्दा होस् वा कुरा गर्दा उनीहरुजस्तै बनिदिनुपर्छ।उनीहरुसँग रमाउने, उनीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ झर्को नमानी बताइ दिनुपर्छ।यसो गर्दा…
होलीको सामान किनिदिने प्रलोभनमा सामूहिक बलात्कार, आरोपी फरार
रौतहट, २३ फागुन । रौतहटमा बलात्कारपछि एक किशोरीलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। रौतहट गुजरा नगरपालिका २ स्थित जंगलमा तीन अपरिचित किशोरले १४ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्तीकरणी गरेका थिए। गुजरा २ मैढा जंगलमा झाडीभित्र शंकास्पद गतिविधि भइरहेको देखेर गस्तीमा रहेको सशस्त्र वनरक्षक टोलीले तीन जना किशोरहरुले किशोरीलाई छाडेर जंगलभित्र भागेका थिए। बिहीबार दिउँसो करिब साढे तीन बजेतिर सशस्त्र वनरक्षक टोलीले किशोर–किशोरीलाई आपत्तिजनक अवस्थामा देखेपछि तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनाको खबर पाउनासाथ प्रहरी चौकी रंगपुरबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द यादवको नेतृत्वमा गएको…